Sary: Federasiona Malagasy ny Tenisy
Tenisy U18: Tompondakan’i Afrika isan-tarika i Toky Ranaivo sy Sampras Rakotondrainibe
Nibata fandresena ary dia tompondakan’i Afrika taona 2020 isan-tarika amin’ny taranja tenisy, latsaky ny 18 i Madagasikara amin’ny ekipa rafetin’i Toky Ranaivo sy Sampras Rakotondrainibe, nandritra ny fifaninanana natao tatsy Pretoria – Afrika Atsimo.
Nigadona tao Riyadh androany vao maraimben’ity sabotsy 15 febroary ity ny delegasiona Malagasy hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra « Coupe Arabe U20 ». Ny ekipan’i Djibouti no hifanandrinana voalohany amin’ny Barea U20 ny Alatsinainy 17 febroary. Nitsapa ny kianja « Al Riyadh Club » izay hanaovana ny lalao ny solontena malagasy androany ary hitohy rahampitso.
jeudi, 13 février 2020 10:34
Sary: Commune Urbaine Antsirabe
Antsirabe: Natao ny fandraisana ara-teknika ny Kianja mitafo vaovao
Vita, omaly, ny fandraisana ara-teknika ny Kianja mitafo vaovao eo Vatofotsy ary dia ho tokanana tsy ho ela ity foto-drafitrasa ity. Dingana iray hampakarana avo ny lentan’ny fanatanjahatena eto Antsirabe ny fahazoana ity Kianja mitafo ity.
jeudi, 13 février 2020 10:17
Kitra - Pro League: Lasa mpanazatran’ny As ADEMA indray i Maitre Rôrô
Nametra-pialana tsy ho mpanazatra ny klioba Jet Mada i Rakotondrabe Romuald, fantatry ny maro amin’ny solon’anarana Maitre Rôrô. Nanaja ny fanapahan-keviny ny klioba. Fantatra taorian’izay fa lasa mpanazatran’ny As ADEMA Analamanga i Maitre Rôrô. Laharana faha-5 mitovy ny As ADEMA sy ny Jet Mada eo amin’ny fifaninanana Pro League. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 12 février 2020 15:18
Kitra - Coupe Arabe U20: Voaasa handray anjara i Madagasikara
Manoman-tena eny amin’ny Centre technique nationale Carion, nanomboka ny 10 febroary teo ny Barea U20 hiatrika ny « Coupe Arabe U20 » hatao any Arabia Saodita ny 17 febroary ka hatramin’ny 5 martsa 2020. Firenena miisa 16 no voaasa handray anjara tamin’ity fifaninanana ity, hitsinjara anaty vondrona efatra. Vondrona B no hisy an’i Madagasikara miaraka amin’i Maroc, Djibouti ary Bahreïn. 20 ny mpilalao hiazo an’i Arabia Saodita, hotarihin’ny mpanazatra Menakely Ruphin sy Rija Juvance.
mardi, 11 février 2020 21:38
Arizaka Raoul – Filohan’ny FMF: Nolavin’ny « Conseil d’Etat » ny fangatahany
Notsipahin’ny « Conseil d’Etat » ny fangatahan’i Rabekoto Arizaka Raoul Romain, filohan’ny Federasiona malagasy ny baolina kitra (FMF), ny hampiantoana sy ny hanafoanana mihitsy ny IST mandrara azy tsy hivoaka an’i Madagasikara. Betsaka ireo fivoriana tokony sy tsy maintsy atrehiny eo anivon’ny Kaonfederasiona afrikanina momba ny baolina kitra (CAF), sy Federasiona iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra (FIFA), manembatsenana ny asany ny fisian’ny IST ka izay no nitondrany ny raharaha teny anivon’ny « Conseil d’Etat » nanaovany io fangatahana io. Tsy nahazo rariny anefa fa nolavin’ny « Conseil d’Etat » ny fangatahany. Midika izany fa tsy mahazo miala eto Madagasikara i Arizaka Raoul. Velon’ahiahy ireo mpitia baolina kitra sao hisy fiantraikany amin’ny hoavin’ny kitra malagasy sy ny Barea, izay eo ampanomanana lalao iraisam-pirenena, izao fepetra ara-pitsarana mahazo ny filohan’ny Federasiona malagasy ny baolina kitra izao. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 10 février 2020 09:20
DAX: « Tsy ho afaka hanao BAREA ny tenako mandritry ny efa-bolana »
Nosazian’ny FIFA, Federasiona iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra, tsy mahazo milalao mandritra ny efa-bolana i Andriamirado Arohasina fantatry ny maro amin’ny solon’anarana DAX, mpilalao ao amin’ny Barea an’i Madagasikara. Hajaiko ny fanapahan-kevitry ny FIFA hoy i Dax nitondra fanazavana. Nanipika mazava ity farany, fa olana ara-bola mikasika ny fifindrany avy any amin’ny Fosa Juniors nankao amin’ny Kaizer Chiefs, klioba nilalaovany teo aloha, nefa ankehitriny izy no manjary mizaka ny volany. « Voaporofo izany satria raha tena nisy zavatra tsy nazava nataoko dia tsy ho nantsoin'i coach Nicolas Dupuis izaho tamin'iny CAN 2019 iny ». Marihina fa milalao ao amin’ny Black Leopards, klioba diviziona voalohany atsy Afrika Atsimo, ankehitriny i Dax.
Nandresy tamin’ny moka fohy 28 noho 27 ny Cosfa Rugby nanoloana ny TFA Anatihazo nandritra ny lalao famaranana tamin'ny Gold Top 20 teo amin’ny kianja Makis Andohatapenaka androany 09 febroary 2020. Efa nitarika tamin’ny isa 20 noho 19 ny Cosfa teo amin’ny ampaham-potoana voalohany. Voahosotra ho tompondaka ny ekipan'ny Tafika Malagasy. (Jereo Sary Tohiny)
Miangavy ireo mpitia baolina rugby, mikasa ny hijery ny lalao famaranana anio eny amin’ny Kianja Makis-Andohatapenaka, ny Malagasy Rugby « mba hijanona any an-trano » avokoa mba « hisorohana ny fifanosehana », araka ny fanambarana nataony io maraina io. Efa feno ny toerana noho ny fahamaroan'ny olona tonga mijery baolina, hoy ny fanambarana, koa entanina hijanona any an-trano ireo rehetra mbola mikasa ny handeha eny amin'ny Kianja Makis.
mercredi, 29 janvier 2020 08:28
Mining Business Center Ivato: Fihaonam-ben'ny Baolina kitra
Maharitra roa andro ity Fihaonam-ben'ny Baolina kitra handinihina ny fomba anatsarana ny baolina kitra eto Madagasikara. Tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahan-tena, Tinoka Roberto, omaly talata 28 janoary, tetsy amin'ny Mining Business Center Ivato. Talohan'ny nandraisany fitenenana, dia nahatsiaro manokana ireo traboina tamin'ny rivotra nitondra oram-be ka niteraka loza ho an'ny Malagasy maro. Niaraka nitsangana ny rehetra nanamarika iray minitra fahanginana ho an'ireo namoy havana tao anatin'izany. Nanamafy ny minisitra Tinoka Roberto, fa dia vonona hanome ny heriny rehetra hanampiana ny kitra Malagasy, ary dia nankasitraka ny ezaka goavana nataon'ny Barea, indrindra tamin'ny fandresena goavana tamin'ireny CAN ireny. Maro ihany koa hoy izy ny ezaka ataon'ny Kilioba sy ny Federasionina, ka vonona hatrany ny fanjakana anampy ny mpilalao sy ny mpikarakara. Mpizaika 170 manerana ny Nosy moa no miaraka mandinika loha-hevitra 8 mandritra izao fihaonana izao, izay hifarana androany alarobia 29 janoary.